Major unity into disastrous division within hours - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Miskiin-Macruuf-Aqiyaar, Friday at 09:45 AM in Politics
Shalay tolka were celebrating a major unity among them by trying to support one singe candidate for jagada madaxweynaha. Today a major war in Dhuusamareeb, against one another by the same tolka.
From this on yesterday:
To this today, which is a deliberate provocation related perhaps to the (s)elections:
Dad deegaanka ah ayaa BBC Soomaali u sheegay in dagaalka xooggiisa uu hadda ka socdo xarunta Inji, xero gadiid, madaxtooyada, cisbitaalka guud iyo saldhigga booliska.
Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka Dhuusamareeb.
Garoonka Dhuusamareeb oo ku yaalla meel ka baxsan magaalada ayaa waxaa ku sugan ciidamo Jabuutiyaan ah oo ka tirsan ATMIS.
Dagaal u dhaxeeya ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlusunna waljamaaca ayaa weli ka socda qeybo kamid ah magaalada Dhuusomareeb, waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo aan weli xog sugan laga haynin.